EO / vaIri kamera Module
Kubatsira kwetembiricha yekufungidzira kamera
Infrared thermal imaging kamera inogona kuwana ruzivo rwakananga rwechinhu chakayerwa nekuona kupisa kwekupararira kwechinhu chakayerwa, kusanganisira chimiro chemukati nenzvimbo chaiyo yechinhu. Zvakanakira zvitatu zvekupisa kwekufungidzira kamera: 1. Yakachengeteka kushandisa ...
Chii chinonzi infrared laser kamera?
Chii chinonzi infrared laser kamera? Icho infrared mwenje kana laser? Ndeupi musiyano uripo pakati peiyo infrared mwenje uye laser? Muchokwadi, infrared mwenje uye laser ipfungwa mbiri muzvikamu zvakasiyana, uye infrared laser ndiyo chikamu chekupindirana kweaya maviri mazano: Visible light wavelength ...
Infrared imaging kamera yekuzvidzivirira kunyorera
Mumakore achangopfuura, infrared imaging kamera yave kuwedzera kukosha mumiganhu yekudzivirira maficha. 1.Kutarisa tarisiro husiku kana pasi pemamiriro ekunze akaomarara: Sezvo isu tichiziva, inoonekwa kamera haigone kushanda zvakanaka husiku kana isina IR kuvhenekera, infrared thermal imager passively pass ...
Thermal Kamera Zvimiro uye Kubatsira
Mazuva ano, thermal kamera inowedzera uye inoshandiswa zvakanyanya mukushandisa kwakasiyana siyana, semuenzaniso Ongororo yeSainzi, Midziyo yemagetsi, R & D yemhando yekudzora wedunhu kutsvagisa nekusimudzira, Kuongorora kwekuvaka, Mauto uye chengetedzo. Isu takaburitsa dzakasiyana dzakasiyana dzehurefu hwekupisa camer ...
Yakakurudzira Kamera SG-ZCM2030DL kutsiva SONY Kamera
Tine dzakasiyana dzakasiyana mhando zoom kamera module, kusanganisira network zoom kamera uye yedhijitari zoom kamera (LVDS), sekuziva kwedu, akawanda SONY mhando akamiswa izvozvi, uye vazhinji vatengi vanoshandisa 30x zoom digital kamera SG-ZCM2030DL kutsiva SONY kamera FCB- EV7520 uye FCB-EV7520A, uye vane yakanaka kwazvo perf ...
Nyowani Yakaburitswa OIS Kamera
Isu takangoburitsa kamera nyowani pana Zvita, 2020: 2Megapixel 58x Yakareba Range Zoom Network Kubuditsa OIS Kamera Module SG-ZCM2058N-O Yakakwirira Mwenje Zvimiro: 1.OIS chimiro OIS (Optical mufananidzo kudzikamiswa) zvinoreva kuzadzisa mufananidzo kudzikama kuburikidza nekumisikidzwa kwemaziso echinhu. , senge Hardware lens, kune ...
Chii chinonzi Defog Kamera?
Yakareba renji zoom kamera inogara iine defog maficha, anosanganisira PTZ kamera, EO / IR kamera, inoshandiswa zvakanyanya mukudzivirira uye muchiuto, kuti uone sezvinobvira. Kune maviri akakosha marudzi eiyo mhute yekupinda tekinoroji: 1.Optical defog kamera Chaiwo chinoonekwa mwenje haigone kupinda mumakore uye utsi, asi padhu-mukati
Optical defog basa muSavgood Network ma module
Makamera ekucheresa akaisirwa kunze anotarisirwa kumira muyedzo wekushanda kwe24 / 7 kuburikidza nechiedza chakasimba, mvura, chando, uye mhute. Aerosol zvikamu mumhute zvakanyanya kunetsa, uye zvinoramba zviri zvimwe zvezvikonzero zvikuru zvekushatisa hunhu hwemufananidzo. Mamiriro ekunze zvakanyanya affe ...
Infrared Thermal uye Yakareba Range Inoonekwa Kamera YeBorder Security
Kuchengetedza miganhu yenyika kwakakosha kuchengetedzeka kwenyika. Nekudaro, kutsvaga vangango pinda kana vanobiridzira mumamiriro ekunze asingafungidzike uye nharaunda dzakasviba zvachose idambudziko chairo. Asi infrared thermal imaging makamera anogona kubatsira kusangana nekuonekwa kunodiwa mu l ...
Savgood inoburitsa inotungamira pasi rese Zoom Block Kamera ine yakareba kupfuura 800mm stepper mutyairi Auto Foucs Lens.
Mazhinji maLong Range Zoom mhinduro ari kushandisa akajairwa bhokisi kamera uye neinjini yeLens, iine imwezve Auto Focus bhodhi, yemhinduro iyi, kune hutera hwakawanda, hushoma hunyanzvi Auto Focus, ichapotsa tarisiro mushure menguva yakareba uchishanda, mhinduro yacho yese inorema kamera uye al ...